Rodrygo oo shaaciyay rajadadiisa sanadka 2022 – Gool FM
Dajiye January 25, 2022
(Madrid) 25 Jan 2022. Xiddiga Real Madrid ee Rodrygo ayaa uga mahadceliyay macalinka reer Talyaani ee Carlo Ancelotti fursadaha uu kaga qeybgalo kooxda Los Blancos, laakiin isla waqtigaas wuxuu carabka ku adkeeyay in rajadadiisa sanadka 2022 ay tahay inuu ku guuleysto Koobka Adduunka.
Xiddiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Rodrygo ayaa wareysi uu siiyay shabakada TNT ee dalka Brazil, wuxuu shaaca kaga qaaday inuu heysto furasdo badan uu hormar ku sameyn karo si uu ugu guuleysto koobab sanadka cusub.
Rodrygo ayaa marka hore ka hadlay la shaqeyntiisa macalinka Carlo Ancelotti, wuxuun yiri:
“Aad ayuu muhiim u ahaa, wuxuuna markasta igu caawiyay inuu ila shakeeysto kahor bilowga xilli ciyaareedka, waa inaan horumar sameeyaa oo aan aqbalaa dhaleeceyntiisa.”
“Waxay ii ahayd wax muhiim ah aniga, waxaana rajeynayaa inaan sii wado oo aan la dego xulka qaranka Brazil.”
“Waan ogahay in dhamaan ciyaartooyda reer Brazil ay rabaan inay ka qeyb galaan Koobka Adduunka ee 2022 ee Qatar, laakiin waxaan rajeynayaa inaan ka qeyb galo oo aan helo fursado sidoo kale.”
“Haddii uu jiro koob aan doonayo inaan ku guuleysto sanadkan waa Koobka Adduunka.”
“Markii aan ka hadlayno Champions League, Real Madrid ayaa marwalba ah kooxda ugu cad-cad, marka aad Real joogto waa inaad ka fikirtaa kaliya ku guuleysiga koobab, gaar ahaan Champions League.”
“Ciyaarta Paris Saint-Germain ayaa noqon doonta mid qaas ah sababtoo ah waxay heystaan qaar ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican, waxay noo noqon doontaa hawl adag.”
Weeraryahan hore ee kooxda Real Madrid ah oo xaqiijiyay in Mbappé uu u wareegayo garoonka Santiago Bernabeu